८ करोडको पुल नबन्दा १ लाख जनताको जीवन जोखिममा (भिडियोसहित) « Janata Samachar
८ करोडको पुल नबन्दा १ लाख जनताको जीवन जोखिममा (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 23 December, 2019 7:40 pm
इलाम । प्रदेश नम्बर १ को इलाम । नेपाली राजनीतिमा इलामको उपस्थिति बलियो छ । त्यतिमात्र होइन, इलामले चाहे देशका कुनै पनि जिल्लामा बजेट नै तलमाथि हुन सक्ने हैसियत राख्छ अहिले पनि छ । उसो भए सम्झनुहोस् त इलाममा विकास निर्माणमा केही कमी होला र ? जनता दुःखी होलान् र ? तपाईं हाम्रो अनुमान यस्तै हुन्छ । तर यथार्थमा ८ करोड रुपैयाँको पुल पनि समयमा बनेन इलाममा ।
काठमाडौंमा हजारौँ रोपनी जग्गा गोलमाल भइरहेको छ । अर्बौँकाे बजेटमा बदमासी गरिएको छ । ८ करोड रुपैयाँकाे पुल नबन्दा इलामका विभिन्न स्थानीय तहका १ लाख जनसंख्या प्रभावित भएका छन् । पुल आधा बनेको छ । बनिसक्नु पर्ने थियो ४ वर्ष अघि नै । तर ठेकेदारहरुले पूरा पैसा लिएर काम आधा पारे । आधा पुल के काम ? आँखा अगाडि आधा पुल, तर्नै नसक्ने भेलमा ज्यान हुलेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता १ लाख जनतालाई । ठेकेदारले समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सुनेका सुदूरपूर्व इलामका सर्वसाधारणले थाहा पाए नि, हो रहेछ, ठेकेदारले समयमा काम गर्दैन रहेछन् अनि पैसा पूरा लैजाँदा रहेछन्, कर्मचारीले कारबाही गर्नु पर्नेलाई पैसा दिएर पठाउँदारहेछन् ।
इलाम सदरमुकाम र माई जोगमाई गाउँपालिका जोड्ने मूल सडकमा पुलको आवश्यकता थियो । माईखोलाको दुधाङबेँसीमा पुल बनाउन थालियो । भौतिक विकास र सुविधा हुने आशामा स्थानीय गद्गद थिए । तर ६ वर्ष बित्यो । अन्त पनि यस्तै हुन्छ भन्ने सुनेका इलामेलीले आफ्नै गाउँमा पनि पुल अधुरै भएको अनुभूत गरे । तर चार वर्षअघि नै निर्माण भइसक्नु पर्ने पुलको यो दुर्दशा छ । पुल निर्माणको काम आधा पनि हुनसकेको छैन ।
पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नभएपछि कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र धरौटी जफत गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने भनेको पनि वर्षौँ भयो । तर कारवाही प्रकृया पनि भनाइमै सीमित छ । सडक डिभिजन कार्यालय इलाम ठेकेदारहरुको प्रभाव छायाँमा छ भन्दा फरक पर्दैन । निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कठोर बनेर कारवाही गर्ने सरकारी नीति छ । तर नीति कागजमै सीमित छ र कागज दराजमा थन्किएको छ ।
इलामको माई नगरपालिका, दानाबारी, महमाई, चिसापानी तथा माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट हाटबजार भर्न झापा, खुदुनाबारी, शनिश्चरे, बिर्तामोड पुग्नुपर्छ । मुख्य सडकको पुल नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा एक लाख जनसंख्या सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
हामी भिजिट नेपाल टवान्टी ट्वान्टी मनाउने तयारीमा छौँ । एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो इलाम । नेपाल र भारत सीमाको जिल्ला भएकाले नेपाली भाषी भारतीयहरुको प्रदेश दार्जिलिङ र सिक्किमका भारतीयको पनि आकर्षण हो इलाम । अझ सन्दकपुर पर्यटन केन्द्र त भारतकै प्रसिद्ध गन्तव्य हो । नेपालले आफ्नो भूगोल भनिरहँदा भारतले पनि आफ्नो भूमि दाबी गरिरहेको छ त्यहाँ । जे होस्, पर्यटकीय केन्द्र र आकर्षण हाम्रो चासो हो । तर दुःखको कुरा इलाममा १ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको छ पुल नबन्दा । पूलको पूरा भुक्तानी लिएर ठेकेदार कम्पनीहरु सम्पर्क बाहिर छन् या कर्मचारीले कमिसनको मोहमा सम्पर्कमा नआएको भनेर ठेकेदारलाई जोगाइरहेका हुन् रु भ्रष्टाचार सानो हो, ८ करोड रुपैयाँको काममा ढिलाइ । तर १ लाख जनताले ज्यान माया मारेर खोलाको बाढी तर्नु पर्ने बाध्यता के राज्यका लागि संवेदनशील विषय होइन ? हामी कहिलेसम्म बदमासको हिसाब मात्र राखिरहन्छौँ र कारबाही गर्न लगलग खुट्टा कमाउँछौँ ?
पैसा होइन, प्रवृत्ति हो, हामीले उठाउन खोजेको विषय । गलत प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कारबाहीबाट उन्मुक्ति । पुलको ठेक्का लिनेदिने दुवैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पत्र काटेर सोध्ने पो हो कि ? या स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले चासो दिने हो ? जनतालाई न्याय चाहियो । पुल चाहियो । विकास चाहियो ।
यही विषयमा जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘बाइलाइन’ मा प्रसारण भएको शृंखला हेर्नुहोस् :
८ कराेड बजेट